कस्तो रह्यो दक्षिण एशिया को कोभिड पछिको शेयर बजार ?? - Laltin.com
कस्तो रह्यो दक्षिण एशिया को कोभिड पछिको शेयर बजार ??
कोलम्बो स्टक एक्सचेञ्ज
श्रीलंकाको एक मात्र स्टक एक्सचेञ्ज कोलम्बो स्टक एक्सचेञ्ज हो । सन् १९८५ मा स्थापित यस एक्सचेञ्जको मुख्य ईन्डेक्स ए.एस.पि.आई २०२१ सेप्टेम्बरमा ९५२४ को बिन्दुमा पुगेको छ । २०२० जनवरीमा ५८८०.११ को बिन्दुबाट कोभिड फल को समय २०२० मे मा ४२१९.०३ को बिन्दु छोएको यस ईन्डेक्स १२५ % वृद्धिका साथ ९५२४ बिन्दुको उचाइमा पुगेको छ ।
अर्को इन्डिकेटर एस.एन्ड.पि एस.एल २० पनि कोभिड फल २०२० मे मा १६६५.५८ बाट ११४% वृद्धिका साथ हाल ३५८१ को बिन्दुमा पुगेको छ । यस एक्सचेञ्जको बजार पूँजीकरण १७.३९ बिलियन अमेरिकी डलर छ ।
ढाका स्टक एक्सचेञ्ज
ढाका स्टक एक्सचेञ्ज सन् १९५४ मा स्थापित भएको हो , इस्ट पाकिस्तान स्टक एक्सचेञ्जको नाम बाट स्थापित भएको यस एक्सचेञ्ज १९८६ बाट ढाका स्टक एक्सचेञ्जको नाम बाट कारोबार हुन थालेको हो। २०२० जनवरीमा ४४५३.१५ बाट कोभिड फल को समय २०२० मार्च मा ३५९३.१५ बाट १०५ % बढेर २०२१ अक्टोवरमा ७४०२ को हाई छोएको छ। ३०८ वटा कम्पनी लिस्टेड रहेको यस स्टक एक्सचेञ्जको बजार पूँजीकरण ६८ अर्ब ५० करोड डलर रहेको छ ।
माल्दिभ्स स्टक एक्सचेञ्जमाल्दिभ्स स्टक एक्सचेञ्ज सन् २००८ मा स्थापना भएको हो । सन् २००८ मा अल टाइम हाइ ४२२.८९ बाट घटेर सन् २०१४ मा ११४ विन्दुको लो मा आएको यस् स्टक एक्सचेञ्जलाई कोभिड फलको असर खासै देखिएन । २०१४ देखि २०२१ सेप्टेम्बर सम्ममा २०४ को बिन्दु सम्ममा ४४ % मात्र वृद्धि भएको छ । जम्मा ९ वटा मात्र कम्पनी लिस्टेड रहेको यस स्टक एक्सचेञ्जको बजार पूँजीकरण १ अर्ब १३ करोड डलर रहेको छ ।
बम्बे स्टक एक्सचेञ्ज
दक्षिण एसियाको सबै भन्दा ठुलो अर्थतन्त्र रहेको दश भारत को सबै भन्दा पुरानो र ठुलो स्टक एक्सचेञ्ज बम्बे स्टक एक्सचेञ्ज हो जस्को स्थापना १८७५ मा भएको हो। सन् २०२० को जनवरीमा सेन्सेक्स ईन्डेक्स ४०४७६ को बिन्दु बाट २०२० मार्च मा २५६३८ को बिन्दु छोएको थियो । सो समय बाट २०२१ अक्टोबरमा मा १३५% को वृद्धिका साथ ६०४१२ अल टाईम हाई पुगेको छ । यस स्टक एक्सचेञ्जको बजार जिकरण ३.६ ट्रिलियन डलर छ । यस स्टक एक्सचेन्जमा ५००० भन्दा धेरै कम्पनीहरु लिस्टेड छन् ।
भारतको अर्को ठुलो स्टक एक्सचेञ्ज नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज हो । १९९२ मा स्थापना भएको यस स्टक एक्सचेञ्ज बजार पूँजीकरण ३.१ ट्रिलियन डलर छ । यस स्टक एक्सचेञ्जमा १६०० भन्दा धरै कम्पनी लिस्टेड छन् । निफ्टि ५० सब ईन्डेक्स २०२० को जनवरीमा ११९२९ बाट घटेर २०२० मार्च को कोभिड फलमा ७५११ पुगेको निफ्टि ५० १३७% को वृद्धिका साथ २०२१ सेप्टेम्बर मा १७९४७ को उचाईमा पुगेको छ ।
कराची स्टक एक्सचेन्ज
कराची स्टक एक्सचेञ्ज पाकिस्तानको स्टक एक्सचेञ्ज हो १९८५ मा स्थापित यस एक्सचेञ्जको ईन्डेक्स कराची १०० २०२० को जनवरीमा ४०७३५ को बिन्दु बाट कोभिड फल को समय २०२० मार्च मा २७०४६ को बिन्दु छोएको यस ईन्डेक्स ८० % वृद्धिका साथ २०२१ सेप्टेम्बर मा ४३९७२ बिन्दुको उचाइमा पुगेको छ ।
कराचीअल ईन्डेक्स कोभड फल पछी २०२० मार्चमा १९९४३ बाट ६६ %वृद्धिका साथ हाल २०२१ सेप्टेम्बरमा ३२५८९ को बिन्दुमा पुगेको छ यस एक्सचेञ्जको ५७ बिलियन अमेरिकी डलर छ।
रोयल सेक्युरेटिज एक्सचेञ्जअफ भुटान
रोयल सेक्युरेटिज एक्सचेञ्ज अफ भुटान सन् १९९३ मा स्थापना भएको हो । यो दक्षिण एसियाको सानु स्टक एक्सचेञ्ज हो । रोयल सेक्युरेटिज एक्सचेञ्ज सन् २०२० को जनवरीमा १०२० को बिन्दु बाट २०२० मे मा ९०४ को बिन्दु छोएको थियो । सो समय बाट २०२१ सेप्टेम्बरमा १४%वृद्धिका साथ १०३७ को बिन्दुमा पुगेको छ । यस स्टक एक्सचेञ्जमा १९ कम्पनी लिस्टेड छन्। यस स्टक एक्सचेञ्जको बजार ६७८ मिलियन डलर रहेको छ ।
देश इन्डेक्स कोभिड फल पछि सेप्टेम्बर २०२१ वृद्घि प्रतिशत
श्रीलंका कोलम्बो स्टक एक्सचेञ्ज ४२१९.०३ ९५२४ १२५%
बंगलादेश ढाका स्टक एक्सचेञ्ज ३५९३.१५ ७४०२ १०५%
माल्दिभ्स माल्दिभ्स स्टक एक्सचेञ्ज १९६ २०४ ४%
भारत बम्बे स्टक एक्सचेञ्ज २५६३८ ६०४१२ १३५
भारत नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज ७५११ १७९४७ १३७
पाकिस्तान कराचि अल ईन्डेक्स कराचि स्टक एक्सचेञ्ज १९९४३ ३२५८९ ६६
भुटान रोयल सेक्युरेटिज एक्सचेञ्ज अफ भुटान ९०४ १०३७ १४%
– निराजन सापकोटा
Previous: सेयर बजारको रोचक किस्सा: कसरी हुन्छ रु.२०० भन्दा रु.५०० सस्तो ?
Next: दशैँ पछि नेप्सेमा सकारात्मक संकेत !